MAHAJANGA : Ripaky ny afo ataon’ireo mponina ny tanety manamorona ny alam-pirenena fahefatra
Tany mirefy 20 hekitara no indray kilan’ny afo amin’ny lalam-pirenena fahefatra iny vokatry ny doro tanety ataon’ireo mponina manodidina. 21 avril 2017
Olona avy nifoka sigara no nanipy afo teo ambony ny bozaka ka dia niparitaka ny afo ary niampita tamin’ny toerana hafa manakaiky teo. Sarotra ny famonoana izany satria nisy rivotra mafy ary dia fokontany telo no indray ripaky ny doro tanety, dia ny Fokontany Ampombonavony, Belobaka, Amparemahitsy.
Niakatra an-tanàn-dehibe ny afo ary samy nandray andraikitra tamin’ny famonoana izany ireo mponina manodidina. Ny tao amin’ny Fokontany Ampom- bonavony no tena nitondra fasaina tamin’ity doro tanety ity vokatr’ireo bozaka efa maina tao aminy. Niara-nifamonjy ny fiparihan’ny afo ireo mpamonjy voina avy amin’ny Kaominina Mahajanga sy ny Faritra satria dia nihanaka be ny fiparitahan’ny afo. Naharitra ora maro ny famonohana izany satria hatramin’ny 3 ora maraina aza dia mbola nisy afo nirehitra ihany. Nahazo antso an-tariby mahakasika izany ireo mpamonjy voina ka niverina namono ny afo indray.
Tonga nijery ny zava-misy ireo tompon’andraiki-panjakana tao Mahajanga ka dia hisy ny fanadihadiana manokana atao mikasika ity doro tanety nanimba zavatra maro ity. Dingana lehibe tokoa no mbola miandry ny minisiteran’ny Tontolo iainana amin’ny ady atao amin’ny doro tanety ity satria dia tokony ho henjana ny lalàna ho an’ireo izay mandika sy tratra manao izany.
Saika isan-taona dia mitondra faisana hatrany ny bozaka sy ny hazo manamorona iny lalam-pirenena iny noho ny fanimbana ny tontolo iainana. Tsy misy solony anefa ny hazo may fa dia miandry ny fotoam-pahavaratra vao manomboka maniry kely ireo bozaka sy ny hazo ary matetika dia tsy miverina amin’ny laoniny toy ny teo aloha.
Miezaka hatrany anefa ny minisiteran’ny Tontolo iainana, amin’ny alalan’ny sampandraharaham-paritra miaro ireo zava-maniry ireo miaraka amin’ny vondron’olona ifotony saingy mbola mahazo vahana hatrany ny doro -tanety. Tamin’ny taon-dasa dia ripaky ny afo avokoa ny tany mirefy 20 hekitara, tao amin’ny Kaominina Mahajanga II, izay sarotra ny famonoana ny afo noho ny fitsokan’ny rivotra.